यिनै हुन् ति धर्म गरु जस्ले महिलालाई एकान्त कोठामा लैजान्थे र निर्वस्त्र बनाएर उपचार गरेको बहाना गर्दै यौन सम्पर्क गर्थे ! उपचार विधि अरूलाई बताएमा ठूलो क्षति हुने, रोग बल्झिने भन्दै महिलाहरूलाई तर्साउँथे र भन्थे मेरो अनुमतिबिना विवाह गरेमा वा अरूसँग यौन सम्बन्ध राखेमा तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेर मानसिक त्रास देखाउँथे « तात्तातो खबर
यिनै हुन् ति धर्म गरु जस्ले महिलालाई एकान्त कोठामा लैजान्थे र निर्वस्त्र बनाएर उपचार गरेको बहाना गर्दै यौन सम्पर्क गर्थे ! उपचार विधि अरूलाई बताएमा ठूलो क्षति हुने, रोग बल्झिने भन्दै महिलाहरूलाई तर्साउँथे र भन्थे मेरो अनुमतिबिना विवाह गरेमा वा अरूसँग यौन सम्बन्ध राखेमा तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेर मानसिक त्रास देखाउँथे
काठमाडौं – केही महिनाअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा परिवारसहित आएकी एक अविवाहित युवतीको दुर्दान्त कथा सुनेर ब्युरोका अनुसन्धान अधिकारीहरू चकित परे । युवतीमाथि वर्षौंदेखि भएको बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार र त्यसलाई ढाकछोप गर्न सामाजिक सञ्जाललाई हतियार बनाउने आरोपित कोही नभएर, आफूलाई अवतारी लामा बताउने एक व्यक्ति थिए । ती युवतीको कथा सुनेपछि अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले स्वघोषित अवतारी लामा दाबी गर्ने व्यक्तिले धर्मको आवरणमा कैयन् युवतीमाथि यौन शोषण र हिंसा गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै पक्राउ गरेको छ ।
सिन्धुली कुशेश्वर दुम्जा स्थायी घर भई दक्षिणकाली नगरपालिका–१ चाल्नाखेलमा गुम्बा चलाएर बसेका गुरु रिम्पोछे छुल्ठिम दोर्जे यान्तान टुल्कु लामालाई ब्युरोले मंगलबार उनकै गुम्बा पेमा टासी छुल्ठिम घोम्बो कासुङबाट पक्राउ गरेको हाे ।
प्रहरी पुग्दा लामा भिक्षुको पोसाकमा आफ्नो पूजाकोठा छेवैको सोफामा बसेका थिए । प्रहरीका अनुसार २०६६ सालमा शरीर चिलाउने रोग सुरु भएपछि ती युवती परिवारकै सल्लाहमा लामाकहाँ उपचार गर्न भन्दै पुगेकी थिइन् । लामाले ती युवतीलाई दुई साता गुम्बामै आवासीय रूपमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । त्यही सल्लाहका आधारमा गुम्बा बसेकी युवतीलाई लामाले निर्वस्त्र बनाउँथे र ‘उपचार’ गरेको दाबी गर्थे । यही उपचारका सिलसिलामा ती युवतीमाथि लामाले पटकपटक बलात्कार गरे ।
घटना बाहिर जाने डरले लामाले युवतीलाई अनेक कथित धार्मिक मन्त्र सुनाउँदै तर्साएका थिए । युवतीलाई उनको नांगो तस्बिर फेसबुकमा हालेर यौन सम्बन्धी अरू तस्बिर पनि बाहिर ल्याइदिने भन्दै धम्क्याएका थिए । १२ रोपनीमा फैलिएको गुम्बामा मंगलबार लामालाई पक्राउ गर्न जाँदा सात महिला पनि गुम्बामा आवासीय रूपमा बसेका थिए ।
प्रहरीका अनुसार तीमध्ये केही वयस्क उमेरका अविवाहित महिला र केही अविवाहित युवती थिए । जसमध्ये धेरैजसो भने उपचारका लागि भन्दै गुम्बामा आवासीय रूपमा बसेका थिए । ६० उमेर कटेकी एक अविवाहित महिलाले भने पछिल्ला सात वर्षयता गुम्बामा लामाको सेवा गरेर बसिरहेको बताएकी थिइन् । अर्की एक महिला भने झन्डै १८ वर्षकी छोरीसहित गुम्बामा दुई वर्षदेखि बसिरहेकी थिइन् ।
प्रहरीका अनुसार अन्य महिलाले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको खुला रूपमा बताएका छैनन् । तर उपचारका नाममा लामाले धेरै महिलामाथि यौन शोषण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । मंगलबार प्रहरी पुग्दा उनको गुम्बाको एउटा कोठामा केही ‘वाइन’का बोतलहरू पनि भेटिएका थिए । लामाले ती वाइन भगवानलाई चढाउन ल्याएको बताए । उनको कोठामा झन्डै १५ वटा खाममा दर्शनार्थीहरूले भेटीस्वरूप चढाएको पैसा पनि भेटिएको थियो ।
आफूलाई दसाैं पुस्तासम्म एउटै कुलमा जन्मेको अवतारी लामा भएको बताउँदै उनले आफ्नो चित्त दुख्ने र भनेजस्तो काम नगरे युवतीहरूलाई अनिष्ट हुने भनेर धम्क्याउँथे । प्रहरीका अनुसार उपचारका निम्ति भन्दै आएका अधिकांश महिलालाई उनले एकान्त कोठामा लैजान्थे र निर्वस्त्र बनाएर उपचार गरेको बहाना गर्दै यौन सम्पर्क गर्थे । उपचार विधि अरूलाई बताएमा ठूलो क्षति हुने, रोग बल्झिने भन्दै उनले महिलाहरूलाई तर्साउँथे ।
लामाले यौन सम्बन्ध राखेका महिलालाई आफ्नो अनुमतिबिना विवाह गरेमा वा अरूसँग यौन सम्बन्ध राखेमा तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेर मानसिक त्रास देखाउँथे । कतिसम्म भने लामाले केही युवतीलाई आफूलाई पुनर्जन्मको पनि ज्ञान भएको बताउँदै तिमी मेरो पूर्वजन्मको श्रीमती हो भन्थे र करकापमा पारेर नाजायज सम्बन्ध गाँस्थे ।
ब्युरोका प्रमुख डीआईजी पुष्कर कार्कीका अनुसार लामाले धार्मिक अन्धविश्वासमा टेकेर महिलामाथि शोषणको शृंखला चलाएको देखिन्छ । दस वर्षदेखि गुम्बा चलाउँदै आएका लामा त्यसअघि पर्यटकको गाइडका रूपमा काम गर्थे । प्रहरीका अनुसार नियमित प्राप्त हुने भेटीबापतको मोटो रकमबाट उनले गुम्बा चलाइरहेका थिए । त्यसका अलावा उनको आर्थिक स्रोत के–के थियो भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार निजी चालक राखेर हाइलक्स गाडीमा हुइँकिने लामाले त्यति ठूलो गुम्बाको व्यवस्थापन कुन आर्थिक स्रोतबाट गरिरहेका थिए भनेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
ब्युरोले बुधबार नै लामालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेर जबरजस्ती करणी र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दामा पाँच दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । डीआईजी कार्कीका अनुसार धर्मको आवरणमा लामाले गरेका क्रियाकलापबारे मिहिन अध्ययन भइरहेको छ । अन्य पीडित पनि प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका छन् ।
इकान्तिपुरमा खबरमा छ
रोल्पा, होलेरिका चिन्तमनी पुनको यस्तो बिजोग